Xisbiga Socialdemokraterna oo been ka faafiyay Labada Xisbi ee Moderaterna iyo Sverigedemokraterna. Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaXisbiga Socialdemokraterna oo been ka faafiyay Labada Xisbi ee Moderaterna iyo Sverigedemokraterna.
Xisbiga Socialdemokraterna oo been ka faafiyay Labada Xisbi ee Moderaterna iyo Sverigedemokraterna.
September 1, 2018 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
sadax siyaasi oo ka tirsan Xisbiga Socialdemokraterna kana soo galay dhanka Golaha Deegaanka ayaa been ka faafiyay kabo kamid ah Xisbiyada Dalka ee kala ah Moderaterna iyo Sverigedemokraterna.
sadaxda siyaasi ayaa Qoraalkooda u isticmaalay Luuqada Carabiga iyagoo ku faafiyay dhanka Baraha Bulshada ku xiriirto.
siyaasiyiinta ayaana sheegay in labada Xisbi ay xirayaan Masaajidyada ka dhisan Dalka isla markana dumarka ma mamnuucayaan Xirashada Niqaamka ama indho_shareerka taasi oo lagu sheegay wax been abuur ah.
dhamaan sadaxda siyaasi ee beenta fidiyay ayaa si qasab ah looga joojiyay shaqadooda xisbiga Socialdemokraterna.